‘किन हामीले राजदूत या विश्वविद्यालयमा भागबण्डा खोज्ने ?’ : शेखर कोइराला (अन्तर्वार्ता) « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र हुने बहस र छलफलको विषयलाई विवाद भयो भनेर भन्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् । कोइरालाले आफूहरुले समयमै पार्टीको महाअधिवेशन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको स्पष्ट पारे । आज (सोमबार) विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले पार्टी महाधिवेशनको मुखमा हँुदाखेरि सभापति शेरबहादुर देउवाले विभाग गठन गरेको र क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेकोले ववाद भएको भएपनि त्यो ठुलो कुरा नभएको जिकिर गरे । उनले पार्टी सभापतिले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नु नराम्रो नभएपनि भागबण्डाको लागि भेट्न गलत भएको बताएका छन् । प्रस्तुत छ नेता कोइरालासँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र किन यस्तो अहिले भद्रगोल भयो ? भन्नुहोस् त । के कारणले ? जताततै विवाद छ नि ? नेताहरु अन्तरद्धन्द्धमा छन् ?
होइन, विवाद होइन । पार्टीभित्र यस्ता कुराहरू भईरहन्छन् । यसलाई विवाद भन्नुभएन ।
पार्टी सभापतिको विरुद्धमा तपाईँहरूले ज्ञापनपत्र नै बुझाउनुपर्ने, विरोधपत्र नै दर्ता गराउनुपर्ने कारण के त अहिले ?
पार्टी नेतृत्वले कुरा सुन्नुपर्छ । महाधिवेशनको मुखमा छौँ हामी । महाधिवेशनको मुखमा हँुदाखेरि उहाँले विभाग बनाउँदै हुनुहुन्छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दै हुनुहुन्छ । विवाद त भईहाल्छ नि, त्यो ठुलो कुरा त होइन ।
पार्टी सभापतिले विभाग गठन गर्दा तपाईँहरूलाई के आपत्ति ? भन्नुहोस् त, अहिलेको अवस्थामा ।
मलाई त कुनैपनि आपत्ति छैन । मलाई एउटै आपत्ति छ, फागुन ७ गते पदाधिकारीहरूको बैठकले ल्याएको हो, मैले ल्याएको होइन । कुनै पनि सदस्यलाई सोधेर ल्याईएको होइन । मलाई केही आपत्ति छैन, जे कुराको पनि ।
महाधिवेशनतिर नलागेर किन तपाईँहरू विभाग गठनलाई लिएर किन विवाद गर्दै हुनुहुन्छ ?
जिम्मेवारी कसले लिने समायोजनको ? केन्द्रिय सदस्यहरूले नोमिनेट गर्नुहुन्छ, अनि क्रियाशील वितरण गरिदिनुहुन्छ । कति दिने ? उहाँहरू आँफै डिसिजन गर्नुहुन्छ । त्यसको केही मापदण्ड छैन ? एकजना मान्छेलाई ल्याउने, उहाँकै जिल्लाको एकजनालाई ल्याउनुभयो । आमन्त्रित केन्द्रिय सदस्य बनाउनुभयो । कुन आधारमा दिनुभयो ? तपाईँहरूले नै थाहा पाउनुहुन्छ, उहाँले कति गलत काम गर्नुभएको छ भनेर ।
होइन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कहाँ कहाँ र कसरी गलत गरिरहनुभएको छ ? बताउनुहोस त ?
मलाई अधिवेशन चाहिएको छ । मलाई कुनै किसिमको जस्टिफाई गर्नु छैन, उहाँले सही गर्नुभयो या गलत गर्नुभयो भनेर । मलाई चाहिएको छ, नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन । फागुनमा गर्छौँ भनेर उहाँहरूले नै ल्याउनुभएको हो । अब फागुनमा हुँदैन भनेर उहाँहरूकै साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ । अब त्यसपछि भदौमा जाला । नेपाली कांग्रेसको अस्तित्व समाप्त नहोस् । मेरो केही चाहना छैन्।
अहिले त महाधिवेशन हुन सक्दैन नि त फागुनमा, धेरै चुनौती र अप्ठ्यारा छन् नि ?
होइन त्यसो भए किन ल्याएको ? कसले ल्यायो त महाधिवेशनको मिति ? पदाधिकारीहरू बसेर ल्याएको होइन ? पूर्व पदाधिकारीहरु बसेर ल्याईएको होईन ? हामीहरूलाई त सुनाईएको हो, फागुन ७ गतेदेखि महाधिवेशन सुरु गर्छौँ भनेर, केन्द्रिय समितिका सदस्यहरूले । किन ल्याउनुभयो त पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरू बसेर ?
तपाईहरु पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको विरुद्धमा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ ? अहिलेको अवस्थामा यो कार्यक्रम गर्नु उचित हो र ?
हेर्नुहोस, पार्टीभित्र उचित÷अनुचित त्यो सेन्ट्रल कमिटीमा छलफल गरेर गर्ने कुरा हो । यो पार्टीभित्रको आन्तरिक विषय हो । यसमा तपाईँहरुले किन धेरै चिन्ता लिनुभएको छ ? हामीले कसैको विरुद्धमा हस्ताक्षर गरेको होईन नि । यो त एउटै पार्टी हो नि । वादविवाद, छलफल र सम्वाद हुन्छ । तर, अधिवेशन हुनुपर्छ । अधिवेशन भएन भने समस्या हुन्छ । अधिवेशनको विषयमा पनि तपाईंलाई एउटा कुरा सुनाउँ । नेपाली कांग्रेसले एउटा विज्ञप्ती निकाल्यो कि कोरोनाको कारणले हाम्रो अधिवेशन समयमै हुन सकेन भनेर । अप्ठ्यारो छ, गाह«ो छ भनेर भन्यो । थाहा छ होईन तपाईंलाई ? एक हप्ता पहिले निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन युनियनको अधिवेशन कोरोनाको कारण हुन सक्दैन भनेर सरकारले भन्यो । सरकारले मंसिर २७ गते निर्वाचन गर्न भनेको छ। तर, कांग्रेसले ट्रेड युनियनको निर्वाचन चाँडो गर भनेको छ । आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गर्न कोरोना देखाउने, अनि ट्रेड युनियनको निर्वाचन चाहीँ चाँडो गर भन्ने ? हो, यस्ता–यस्ता कुराहरुले मान्छेलाई चित्त दुख्छ ।
त्यसो भए नेतृत्व अहिले चुकेको छ ? असफल भयो भन्ने तपाईंको निश्कर्ष हो ?
होईन, होईन । म असफल भयो भनेरपनि भन्दिनँ । चुकेको पनि भन्दिनँ । म के भन्दैछु भने हामी कहाँ जान खोज्दैछौं ? तपाईं संवैधानिक परिषदमा छलफल गराउनुहुन्छ । दिनदिनै प्रधानमन्त्रीजीकहाँ सभापतिजी जानुहुन्छ । विपक्षी दलको नेता जानुपर्छ । त्यो ठिक छ । तर, उपसभामुख किन बनाएन ? भनेर नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै प्रश्न गर्यो ? किन गर्दैन् ? सभामुख नभईकन संवैधानिक परिषद बस्नुहुन्छ ? उपसभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्य होईन ? यस्तोले के गर्छ भने नेपाली कांग्रेस चुक्दै जान्छ । प्रतिपक्षी दलको भूमिका कमजोर भन्नुहुन्छ नि, हो यस्ता कुराले कमजो भएको हो । किन हामीले राजदूत या विश्वविद्यालयमा भागबण्डा खोज्ने ? राम्रा मान्छे ल्याउन भनेर भन्ने नि ।
होईन, भागबण्डामा नै हाम्रो देशमा नियुक्तीहरु भैरहेका छन् नि ?
हो । नेपाली कांग्रेसमात्रै होईन, देशै बिग्रिएको त्यही कारणले हो नि । उपकुलपतिको नियुक्तीको कुरामा पनि भागबण्डा होईन, राम्रा मान्छे जो रिसर्च गरेका छन्, हो उनीहरुलाई राख्नुहोस भनेर भन्नुहोस न । प्रतिपक्षीको भूमिकामा भागबण्डामा जानुहुँदैन् । यसो गर्दा पार्टी कमजोर हुन्छ । संवैधानिक आयोग त पूर्वसचिवहरुको क्लब बन्ने भयो । मैले त आर्टिकल नै लेखिसकेको छु । नेपालमा पूर्वसचिव बाहेक अरु राम्रा मान्छे छैनन् ?
काँग्रेसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन नि ?
हो, पार्टीले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । मेरो चिन्ता यही नै हो नि ।
शेरबहादुर देउवाको पक्षमा कृष्णप्रसाद सिटौला पनि जाने हुनुभयो नि ? तपाईँहरूलाई साथ नदिने निष्कर्षमा उहाँले आफुलाई उभ्याउनुभयो ?
को कहाँ जानुहुन्छ, अहिले त कतै जानुस् न । १४औं महाधिवेशनमा कृष्णजी शेरबहादुरतिर जानुहुन्छ कि ? रामचन्द्रजीतिर जानुहुन्छ कि ? आँफै उठ्नुहुन्छ कि ? अहिले सिटौलाजीको मात्र किन कुरा गर्ने ? अरुहरुको पनि कुरा गर्नुहोस । को कहाँ हुनुहुन्छ, अहिले केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । नेपाली कांग्रेसलाई एउटै कुरा म भन्छु, मनपरीतन्त्रको विरुद्धमा हामीहरू एक हौँ, हातेमालो गरौँ । अरू उपाय छैन । उहाँहरू सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सम्मान दिनुपर्छ, हामीहरूले ।
सिटौलाजीले भन्नुभएको छ–मेरो छुट्टै धारणा आउँदैछ । म छुट्टै विचार लिएर जान्छु भनेर । तपाईँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
छुट्टै धारणा, भईगयो त, भन्नुभयो, मेरो छुट्टै धारणा आउँछ भने चिन्ता किन गर्ने मैले ? मेरो केही चिन्ता छैन । उहाँ बेग्लै गर्नुहुन्छ कि ? उहाँ रामचन्द्रजीसँग लाग्नुहुन्छ कि ? उहाँ शेरबहादुरसँग लाग्नुहुन्छ कि ? विमलेन्द्रजीसँग लाग्नुहुन्छ कि ? जता लागे पनि छुट्टै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ । के फरक पर्छ, यसले ? उहाँले १३औं अधिवेशनमा कसलाई सपोर्ट गराउनुभयो ? पार्टीमा गुट, उपगुट सबै छ । सिटौलाजीहरुलाई सिग्नेचर गर्न मन लागेन गर्नुभएन ।
बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सिटौलाको साथ पाउन सक्नुभएन नि ?
उहाँले साथ पाउनुभएन त मैले के गरौं ? म त उहाँहरुसँग सति जान सक्दिनँ । मैले के गरौं ? सिटौलाजीले को सँग सहकार्य गर्नुहुन्छ ? गर्न दिनुहोस न । के फरक पर्छ ? पार्टी हो । नेपाली कांग्रेसभित्र यो लडाई चलिरन्छ । जबसम्म नेपाली कांग्रेस रहन्छ, यस्ता लडाईंहरु चलिहरन्छन् । कसैलाई गुट बनाउन मजा लाग्छ भने गुट बनाएर भए हुन्छ ।
महाधिवेशन सार्ने पक्षमा सिटौला हुनुहुन्छ । शेरबहादुरको प्रस्तावलाई उहाँले समर्थन गर्नुभएको छ नि त ?
ठिकै छ त । सार्न दिनुहोस् न त । के भयो र ? शेरबहादुरको आफ्नै बलले सार्न सक्नुहुन्थ्यो । सिटौलाजीले पनि सार्न बल गरिरहनुभएको छ भने फरक के परेको छ र ? तर, मेरो चिन्ता के भने बैशाखमा पनि चुनाव भएन भने के हुन्छ ? भन्ने चिन्ता हो । भदौभित्र पनि चुनाव भएन भने के हुन्छ ? भन्ने चिन्ता, त्यो चिन्ता गर्नुपर्छ नेताहरूले । जसरी जाँदैछ नेपाली कांग्रेस, त्यो हिसाबले भदौमा पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता छ नि त कोरोनालाई देखाएर । छिमेकी जिल्ला विहारमा चुनाव हुँदैछ एक महिनापछि । हामी पाँच हजारको चुनाव गराउन नसक्ने राजनीतिक दल हो, नेपाली कांग्रेस ?
अन्य पार्टीहरूले धमाधम महाधिवेशनको मिति घोषणा गरिसकेका छन्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले भनिसक्यो, अब चैतमा जसरी पनि महाधिवेशन गराउँछौँ भनेर । अनि तपाईहरु चाहीँ किन महाधिवेशन धकेल्नेतर्फ लाग्नुभयो ?
सबैले भन्दैछन् । कसैले चैत भन्दैछन् । कसैले फागुन भन्दैछौँ, हामीले । तीन वटै राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपा कुनै पनि अधिवेशन चाहँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुहोस । चाहने हामीजस्ता मान्छे मात्र हुन् । त्यो गर्न सक्छन् भने डर के छ भने शुशील कोइरालाको बेलामा नेपाली कांग्रेसले अधिवेशन गर्न सकेन, समयमा हुन सकेन, नेपाली कांग्रेस कोल्याप्स हुने भयो भनेर विधान थप्यौँ, त्यो प्रावधान छ महिना । अहिले शेरबहादुरजीको पालामा त्यो क्लज नै हटाईदिने हो कि भन्ने मलाई डर छ । किनभने यसमा नेकपाले पनि सक्दैन चैतमा गर्नका लागि । कहाँबाट सक्छ ? एउटा मन्त्रीमण्डल बनाउन सकेको छैन । कहाँबाट सक्छ उसले ?
त्यसो भए अब नेपाली कांग्रेसको भविष्य अन्धकार हुने भयो ?
होइन, नेपाली कांग्रेसको भविष्य अन्धकार छैन । किनभने नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ । जुन राजनीतिक दल लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, भविष्य त्यही दलको उज्जवल छ । भोलि त्यही राजनीतिक दल राम्रो हुन्छ ।
लोकतन्त्र/प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा तपाईँकै पार्टीभित्र लोकतन्त्र छैन ? बाहिरी कुराहरू तपाईँहरूले गर्ने ?
आन्तरिक लोकतन्त्र छैन त, म त कहाँ छ भन्दैछु नेपाली कांग्रेसमा ? अहिले जसरी क्रियाशील सदस्यताहरू वितरण भईरहेको छ, प्रवेश गराईएका व्यक्तिहरूलाई हजार हजारवटा क्रियाशीलता दिईएको छ । सर्लाहीमा २७ सय क्रियाशीलता दिईएको छ । डडेलधुरामा ११ सय क्रियाशीलता दिईएको छ । १२ सय क्रियाशीलता रसुवामा दिईएको छ । डोल्पामा एक हजार क्रियाशीलता दिईएको छ । कुनै मापदण्ड नबनाईकन दिदिने ? उहाँहरूको तजबीजिमा गर्ने त पार्टी होइन त, नेपाली कांग्रेस ? त्यसैले लोकतन्त्र छैन भनिएको हो । नेपाली कांग्रेसको विधानमा के छ ? जनसम्पर्क समितिका अधिवेशनहरू गराऊ । अधिवेशन भएन भने तिमीले भाग लिन पाउँदैनौँ । नेविसंघ र तरुण दल, तरुण दल तीनजनाले चल्दछ, नेविसंघको पदाधिकारीहरूको पनि पूरा गर्न सकेको छैन । त्यो अवस्थामा छ नि त । आन्तरिक लोकतन्त्र भएन नि त । अधिवेशन गराउन कसले रोकेको छ ? दलित संघको अधिवेशन कसले रोकेको ? सभापतिले होइन ? हामीले रोकेको हो ?नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन् । आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । यो हाम्रो जिम्मेवारी हो नि ।
पार्टीभित्र पनि तपाईंले एउटा मोर्चाबन्दी बनाउनुभयो, तर तपाईहरु मिल्न सक्नुभएन ?
यो तपाईँहरुको दिमागी उपज हो । यो उपज नराख्नुहोस । केन्द्रीय सदस्यहरु र मिडियाक्रमीहरुले पनि हटाउनुपर्यो । नेपाली कांग्रेसभित्र विचारको लडाईँ हुन्छ । र, अहिलेपनि छ । त्यो विचारको लडाईँ विपी कोइराला हुँदापनि थियो । त्यतिवेला चाहीँ अलिक राम्रो विचारको लडाईँ हुन्थ्यो ।
यदि सिटौलाजीले साथ दिनुभएन भने तपाईँहरु कमजोर हुनुहुन्छ नि ?
उहाँले साथ दिने कि नदिने भन्ने कुरा पछिको कुरा हो । अहिले किन हतारिएको तपाईँहरु ? कसले साथ दिनुहुन्छ कि हुँदैन् ? शेरबहादुरजीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि रामचन्द्रजीलाई गर्नुहुन्छ ? त्यो त अहिले समय बाँकी छ नि । किन चिन्ता गरेको अहिले ?
तर, पार्टीभित्र सिटौलाजी निर्णायक पक्ष हो नि ?
खोई, तपाईलाई लाग्छ । तर, मलाई लाग्दैन् ।
देशमा यतिवेला जताततै भ्रष्टाचार बढिहेको छ, तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ? सडकमा जानुहुन्छ कि चुप लागेर बस्नुहुन्छ ?
म त सडकमा पनि जानुपर्छ भन्नुहुन्छ । कोरोनाले गर्दा भनेर अब नेपाली कांग्रेसले बहाना बनाउनुहुँदैन् । २५ जनाले पनि विरोध गर्न सक्छन् । पार्टीले महिनामा २० वटा प्रेस रिलिज जारी गरेर हुन्छ ? यसले कुनै माने राख्दैन् । मास्क लगाउनुपर्यो । हात पटक पटक धुनुपर्यो । स्यानिटाईज गर्नुपर्छ । संसद पनि अब किन रोक्नुपर्यो ? उपसभामुख बनाउनुपर्छ भनेर किन नभन्ने ? FILE PHOTO